kasper key invalid တဲ့..ဘာကြီးလဲ — MYSTERY ZILLION
kasper key invalid တဲ့..ဘာကြီးလဲ
shalala ရဲ့စက်မှာ kaspersky7တင်ထားတာ အခု keyက blacklist မဟုတ်ဘဲ invalid key ဆိုပီး ပြနေပါတယ်...update ဖြစ်တဲ့ key တင်လည်းမရပါဘူး...patch file လည်းတင်ထားပါတယ်..blacklist မဖြစ်အောင်လို့ပါ..သုံးတာလည်းကြာပါပီ အဆင်ပြေနေပါတယ် ..ခုမှဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲ.. သိရင်ပြောပြကြပါအုံးနော်...
ဟုတ်ကဲ့.......... update ဖိုင်တွေအားလုံးကို ဖျက်လိုက်ပါ......... ကီးကိုလဲ ခဏ ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါ........ ပြီးရင် ကီးကို ပြန်ထည့် update ဖိုင်ကို အသစ်ပြန်ထည့်ပြီး update လုပ်လိုက်ပါ... ကောင်ကောင်ကိုက်တာပါ....... ကောင်ကောင်တွေက သူ့ရဲ့ file တွေကို kasper ရဲ့ update ဖိုင်ထဲကိုရောထည့်လိုက်တာပါ..........
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ..ပြန်စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်နော်...update ပုံမှန်လုပ်ပီး scan လည်းအမြဲစစ်ရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ virus တွေရှိနေတာလဲမသိဘူးတော့...hard disk ကိုတစ်ခြား AVG တင်တဲ့စက်မှာစစ်တော့ ထွက်လာလိုက်တဲ့ virus တွေ တစ်ပုံကြီးပဲ..အဲ့ဒါဘာဖြစ်ရတာလဲဟင်...:O
invalid key ဖြစ်နေရင် update မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် update မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ virus ဝင်သွားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
kaspersky7ဟာ အကောင်တွေကို နိုင်နိုင်နင်းနင်းမရှိတော့ပါဘူး နောက်ထွက်တဲ့2009 လေးကို
သုံးကြည့်ပါ ပြီးတော့ antivir လေးလဲတော်တော်ကောင်းပါတယ် nod32 လေးလဲကောင်းပါတယ်
top ten မှာတော့bitdefender က ထိပ်ကဖြစ်နေတယ် ဒါပေမဲ့စက် က မြင့်မှကောင်းတယ်
မဟုတ်ရင် စက်လေးတယ် ကျန်တာတွေကို တော့ မကြိုက်လှပါဘူး ဒီထဲက တစ်ခုခု ကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ
စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါလိမ့်မယ် အဆင်မပြေရင် MZ က ဆရာကြီးတွေကို မေးပါ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက
ပထမဆုံး date & Time မှန်မမှန်ကြည့်ပါ။ မှန်နေတယ်ဆိုရင်တော့...Kaspersky ရဲ့ settings==>Service မှာ Self-Defence ကို dissable လုပ်ပြီး kaspersky ရဲ့ key ကို delete ပြန်လုပ်ပါ။ ပြီးရင် kaspersky ကို exit နဲ့ထွက်ပြီး C: အောက်က ckis ဆိုတဲ့ folder ကိုဖျက် ပြီးတော့ kaspersky folder ရဲ့အောက်က lia.ppl ကိုပါဖျက် အဲဒါတွေပြီးရင် blacklist မဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ software နဲ့ Keyremove နှိပ် clean နှိပ် ကိုယ်သွင်းထားတဲ့ kaspersky အမျိုးအစားကိုနှိပ်ပြီး လုပ်နေကျအတိုင်းရှေ့ဆက်လုပ်လိုက်ရင် ပြန်ရဖို့နည်းလမ်း ၉၀% လောက်ရှိပါတယ်။
Kaspersky ရဲ့ Self Defence ကို Disable လုပ်
Key ကို Delete လုပ်
ပြီးရင် ..... Non-Blacklisted Maker လေး Run ( StarLay ရဲ့ ဒီ Thread မှာ သွားယူလို့ရပါတယ်။ )
Key Activate ပြန်လုပ် .......
(ညလေးပြောတာရှည်နေလို့ ... ပြန်ချုံ့ပေးတာ ... )
ဒါဆိုရသွားပါပြီ။ ကျနော့် ရုံးကစက်တွေမှာ အဲလိုမျိုး အခါ ၂၀ ထက်မနည်း ကြုံဖူးပါတယ်။ အမြဲအဆင်ပြေပါတယ်။
update ပုံမှန်လုပ်ပီး scan လည်းအမြဲစစ်ရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ virus တွေရှိနေတာလဲမသိဘူးတော့...hard disk ကိုတစ်ခြား AVG တင်တဲ့စက်မှာစစ်တော့ ထွက်လာလိုက်တဲ့ virus တွေ တစ်ပုံကြီးပဲ..အဲ့ဒါဘာဖြစ်ရတာလဲဟင်...:O
Anti-Virus တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုး Performance ခြင်းမတူကြပါဘူး။ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး BitDefender ဖြစ်ဖြစ် ... ဒုတိယအကောင်းဆုံး Kaspersky ဖြစ်ဖြစ် Virus အားလုံးတော့မမိပါဘူး။ ဒါတစ်ခုမှာ ဗိုင်းရပ်ကင်းတယ်ပြပေမဲ့ ... ဟိုတစ်ခုနဲ့စစ်တော့ ဗိုင်းရပ်ပေါ်လာတာပါပဲ .....
ဒါပေမဲ့ .... သိပ်အရေးမပါ . ဒုက္ခမပေးတဲ့ ကောင်ကောင်လေးတွေပဲများပါတယ်။
ဟာအကို က ၀ယ်သုံးတာမဟုတ်ဘူးမလား အဲ့လိုဖြစ်တာက blacklist ဖြစ်သွားတဲ့ကီးစ်တွေဖြစ်နေလို ့
invalid key ဆိုပြီးတော့ပေါ်တာလေ အဲ့တာကြောင့်မလို့keys တွေကို များများယူပြီးတော့ တစ်ခုမရ
တစ်ခုနဲ ့လုပ်ကြတာပေါ့ဗျ အကိုကလဲ မနောက်ပါနဲ့ဗျာအမ်ဇက်ကလူတွေကလဲတော်တော်နောက်တာပဲ
ဘာလဲပညာစမ်းတယ်လို ့ဆိုလို ချင်တာလား:D:D
အကု်ကလဲ update လုပ်နေတဲ့အချိန် အကောင်ကိုက်တယ်လို ့ဗျာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျ ဘယ်လိုလုပ်
အကောင်ကိုက်ရမှာလဲ သူဘာသူ blacklist ဖြစ်သွားတဲ့ ကီးစ်မလို့invalid key ဆိုပြီးတော့ ပေါ်တာလေ
အားလုံးအား လုံးပဲ နောက်တာတွေ၇ပ်ကြပါတော့ ရီရလွန်းလို့အူတက်တော့မယ်:)):))
Sorry ဗျာ....... ကျွန်တော်က Yuri တို့လို မတတ်ပါဘူး လျှောက်ပြောကြည့်တာ....... နောက်များ လူများမေးလို့ ဖြေမိရင် ကိုယ့်ပါးကိုယ် ဆယ်ခါ ပြန်ရိုက်ပါ့မယ်....... ကျွန်တော်က ဘာမှ မတတ်တော့ Contribute လုပ်ဖို့လည်း ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး..... ဒီတော့ ဒီက နားတာပဲ ကောင်းပါတယ်....
မှတ်ချက်.... ကျွန်တော်ပြောတဲ့ အထဲမှာ update လုပ်တုန်း Virus ကိုက်တယ်လို့ မပြောမိဘူးဗျ.... Virus file တွေက update file ထဲကို ရောသွားတယ်လို့ပဲ ပြောတာပါ....
စိတ်မဆိုးပါနဲ ့အကိုရာ တောင်းပန်ပါတယ် ကျွန်တော်ကို ဘယ်လိုမှသဘောမထားပါနဲ့ကျွန်တော်
အဲ့လိုမျိုးလဲ မဆိုလိုပါဘူး အကိုကျေနပ်တဲ့အထိတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ
ယနေ့မှစပြီး MZ မှ မေးခွန်းများကို သိသည်ဖြစ်စေ မသိသည်ဖြစ်စေ ၀င်ရောက်ဖြေကြားတော့မည် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ ကျွန်တော်ထက် တတ်ကျွမ်းသော ဆရာသမားများ ကသာ ဖြေကြားသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် အနှောင့် အယှက် မဖြစ်စေလိုသောကြောင့် ဖြစ်ပါကြောင်း
အဲဒါမျိုးတွေ ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်တောင်ကြုံပြီးပြီလဲ ကိုစိုင်း .......
ကျနော့်ရဲ့ ဒီ Thread မှာလဲကိုစိုင်းသွားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ ........
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ေ၀ဖန်မှုမျိုးကိုပဲလိုချင်တာပေါ့ ..... ကိုယ်စော်ကားခံရတာတော့ဘယ်လက်ခံချင်ပါ့မလဲ။
ကျနော်တို့ရေးတာ အားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ရေးနေတာပါ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ရည်ရွယ်ရေးတာမဟုတ်လို့ .... တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ေ၀ဖန်မှု့ကြောင့် ကျနော်တို့ ယိမ်းယိုင်ဖို့မလိုပါဘူး။
ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်တော်တော် ...... ကိုယ်သိသလောက် Contribute လုပ်တာပဲဗျာ .... ကိုစိုင်းလဲ ဘီလ်ဂိတ်လဲမဟုတ်ဘူး။ စတိဂျော့လဲမဟုတ်ဘူး။
မှားသွားတော့လဲ စေတနာအမှားပဲ .....
ကိုစိုင်းကြောင့် သူများစက်ကြီးပျက်သွားရင်တော့လဲ တစ်မျိုးပေါ့။
အဓိက ကတော့ .... ဒါမျိုးတွေ နောက်လဲကြုံမှာပဲ။
မှားချင်လဲမှားမှာပဲ .... ဒါပေမဲ့ မမှားတဲ့သူမှမရှိတာ။
ကိုစိုင်း signature ကြီးပြန်ပြင်လိုက်ပါဗျာ။
kaspersky ကို၀ယ်သုံးတာ မဟုတ်ပါဘူးရှင်..ကီးက blacklist ဖြစ်တယ်ဆို key blacklist ဆိုပီးပြပါတယ် ..ခါတိုင်း blacklist ဖြစ်ရင် update key ထည့်ရင် ပြန်အိုခေသွားပါတယ်...အခုက invalid key လို့ပြလို့ပါ..ကိုညမီးအိမ်ပြောသလိုပဲ time & date ကလည်းမမှန်တော့ပါဘူး..ပညာစမ်းတာလဲမဟုတ်သလို နောက်တာလဲမဟုတ်ပါဘူး ..တကယ်မသိလို့မေးတာပါရှင်...အခုတော့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပီ..၀ိုင်းပီးဆွေးနွေးပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါရှင်....
Invalid Key က Blacklist ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်လို့ Invalid ဖြစ်သွားရင် Key ၁၀ ခုနဲ့ ၁၀ ခါ ပြန်လုပ်လဲ ... Still Invalid ပါပဲ။ သို့သော် ... အဲဒီအချိန်မှာ Protect လုပ်နေဆဲဖြစ်သလို၊ Viurs Scanning လဲရပါတယ်။
အဲဒါကို ပြန်လုပ်ဖို့က .... ရှေ့မှာ ညမီးအိမ်လဲရေးထားပါတယ်။ ကျနော်လဲ ထပ်ရေးထားတယ်။
အဲဒီနည်းနဲ့ပဲလုပ်ရမှာပါ။ ပြီးရင် Key အဟောင်းကိုပဲ ပြန်ထည့်ရင်တောင် Invalid မဖြစ်တော့ပါဘူး။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆိုရင် ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှမနစ်နာအောင် အပြုသဘောလေးနဲ ့ပြောမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမဆို ကျေနပ်ပြီးပျော်ရွှင်ကြမှာပါ...:) အားလုံးက အမ်ဇက်က မန်ဘာ၀င်တွေပဲ မောင်နှမတွေချည်းပဲ... ကြုံတွေ ့နေတဲ ့အခက်အခဲတွေကို မသိတဲ ့သူတွေက မေးကြမယ် သိတဲ ့သူ ကြားဖူးနား၀ရှိတဲ ့သူ တွေ က ဖြေပေးကြမယ်.. တစ်ချို ့ဆို အမေးနဲ ့အဖြေမကိုက်ဖူး.. ဒါဗေမယ့်သူပြောတာလည်း တစ်ခြားနေရာမှာ အသုံးတည် ့သွားတာပါပဲ... အကို ဘက်က တော့စနောက်ချင်လို့ပြောလိုက်တာ ပါပဲ ..တကယ် ့တကယ် အနောက်ခံရတဲ ့သူက သူ ့ကိုယ်သူဘယ်လောက်သိမ်ငယ်သွားမလည်း... ပြီးတော့ ဒီပို ့စ်တွေက Private မဟုတ်ဖူး.. Public တွေ အားလုံးတွေ ့ရတယ်..။ အကိုဒီလိုရေးထားတော့အကိုက မဆိုလိုဗေမယ့်မရည်ရွယ်ဗေမယ့်အရင် ဦးဆုံး အပြောခံရတဲ ့သူက သူ ့ကိုယ်သူ ယုံကြည် ချက်မရှိနိုင်တော့ဖူးလေ.. မှားမှန်းသိလို ့တောင်းပန်တာမင်္ဂလာပါ.. ဒါဗေမယ့်ဘုန်းကြီးခေါင်းခေါက်ပြီးမှ ကန်တော့လို ပြောတော့မကောင်းဖူးပေါ့မျောက်လည်း ဒီသရက် ကို ဖတ်ပြီး တော် တော် လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး၀င်ရေးလိုက်တာပါ..။ နောက်ဆိုရင် အမ်ဇက်မှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လေးစားစွာနဲ့တစ်ယောက်ပညာတစ်ယောက် လေးစားစွာနဲ့ကျေးဇူးပြုနိုင်ကြပါစေ... ဘယ်သူမဆို ပညာပြည့်တယ်ဆိုတာမရှိ်ပါဖူး... သေသည်အထိပညာဆိုတာ ရှာလို ့မကုန်နိုင်တဲ့အရာပါ.။ အဲဒီတော ့တစ်ယောက်ရဲ့ပြစ်ချက်ကို ရှာ ပြီး အပြစ်တင် ေ၀ဖန်နေမယ့်အစား ကိုယ်ဘယ်လောက် ဒီအမ်ဇက်မှာ အကျိုးပြုနိုင်လည်းဆိုတာပဲ ပြပါ.... ဘယ်နေရာမဆို ဘယ်အဖွဲ ့အစည်းမဆို ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိပါဖူး... အရာရာဟာလိုနေတာချည်းပါပဲ... Everything is not perfect...
အခု mysteryzillion ကို၀င်ဖတ်နေသူအားလုံး ကွန်ပျူတာကိုကျွမ်းနေသူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး
တစ်ချို့က graphic ၊ တစ်ချို့က web အဲလိုမျိုး တွေ သူဟာနဲ့ (သူ့နယ်ပယ်နဲ့သူ ကျွမ်းကြသူတွေပါ) အစ်ကိုလို အားလုံးကျွမ်းတဲ့ သူတွေ ရှားပါတယ်။ တစ်ချို့ က စက်ပြင်နေပေမယ့် ပြသနာ ဖြစ်လာရင် လိုက်မေးရတာပါဘဲ။ အတွေ့အကြုံလိုပါတယ်။ ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာလောက ထဲရောက်တာ ၅ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ တစ်ကယ်တမ်း စမ်းစစ်ကြည့်ရင် ဘာဆိုဘာမှ မသိသေး ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ယောက်၀ါး၀ါးအဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒါက ကျွန်တော့ကိုပြောတာနော်။ အခုမှ စပြီးကွန်ပျူတာနဲ့ ရင်းနှီးသူတွေဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစ်ကိုရေ။
အစ်ကိုရေ သူများရေးထားတဲ့ thread တွေကို ေ၀ဖန်နေမယ့် အစား မှားတာတွေကို ထောက်ပြပေးစေချင်ပါတယ်။ mz ဘော်ဘော်တွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေကြရအောင်ဗျာ။ သရော်တဲ့ အသုံးအနှုံးတွေကို မသုံးမိအောင်သတိထားစေချင်ပါတယ်။ ညီအစ်ကိုလို ခင်လို့ ပြောတာပါ။ mz ရောင်းရင်းများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အကိုပြောတာမှန်သင့်သလောက် မှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ နားလည်မှုလွဲနေသလားလို ့ပဲ ကျွန်တော်ပြော
သူ ့ကို ..လှောင်ပြောင်လိုက်တာ..မဟုတ်ပါဘူး...နောက်တစ်ခုက...ေ၀ဖန်မှုတွေမလုပ်ပါနဲ ့လို ့တော့
မဟုတ်သေးပါဘူး။:65: နောက်ပြီးတော့..ကျွန်တော့ကို မြှောက်သလိုလို ပင့်သလိုလိုနဲ ့.ပြောတာ